Dandilee fi geejjiba | Ramsey County
/Odeeffannoo Kaawuntii Raamsey afaan Oromoo
Hojiin Mootummaa/Hawwaasaa Bulchiinsa Raamsee daandiwwanii fi riqicha naannoo maayilii 300 suphuu fi fooyyesuuf itti gaafatamummaa qaba. Manni hojichaa akkasumas karaa qarqara bakka irra deeman, mallattoolee, sarara biskileetiin irra oofamu, bo’ii bishaanii fi mala geejjiba bulchiinsichaa to’achuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Wantoota akka boollaa fi balfaa yookin waanta miidhaa geessisu tokko karaa Bulchiinsa Raamsee irratti yoo argitan ramseycounty.us/Potholes irratti gabaasuu ni dandeessu.
Dabarsuu, Biskileetii Oofuu fi Adeemuu
Itti fayyadama bashannanaa irratti dabalataansiistamni daandiwwan bulchiinsichaa namoota biskileetii oofanii fi namoota lafoo wal qunnamsiisa. Kuusaan Yuuniyeenii Bulchiinsa Raamsee daandii baaburaa sasalphaa METRO Green Line, daandiwwan baasii mandaraa fi naannoo heddu, fi tajaajila Amtrak Chikaagoo fi Siyaatil gidduu jiruuf wiirtuu geejjibaa tajaajila guutuu kennu ta’ee tajaajila. Iddoo konkolaataa dhaaban, kiraa konkolaataa, konkolaataa tokko waliin fayyadamuu, biskileetii fi namoota lafoo wal qunnamsiisunis jira. Odeeffannoo dabalataatif UnionDepot.org ilaalaa.
Gara fuulduraatti daandiwwan ammayyaa ijaaruuf bulchiinsichi qaamolee michoomaa waliin ni hojjata. Minneapolis – Buufata Xayyaaraa St.Paul/ Moolii Ameerikaa dabalatee karaaleen saffisaa Kuusaa Yuunuyeenii (Union Depot) fi bakkeewwan garaa garaa Naannoo Baha fi Kaaba Baha Twin Cities kan wal qunnamsiisu karoorri isaa qophaa’aa jira.